मुकुन्दले भेटाए प्रेमिका, मंसिरमा घरजम गर्ने तयारी ! (भिडियो) – Butwal Sandesh
सर्मिलालाई युट्युवरले तपाई विवाहित हो की अविवाहित हो भनेर प्रश्न गर्दा उनले आफु अविवाहित भनेर जवाफ दिन्छिन। यस्ता भिडियो भाइरल भएर परिवारले प्रश्न उठायो भने के गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले त्यस्तो भयो भने विवाह गर्ने भन्ने जवाफ दिन्छिन्। उनले भनिन् उहाँ पनि अविवाहित म पनि अविवाहित प्रश्न उठाए भने विवाह गर्ने, उनले जवाफ दिन्छिन्।